I-Semalt Expert: Iintlobo ze-Anchor Text kunye Nendlela yokuzilungisela ngayo i-SEO
Enye yezona zininzi ezisebenzayo zokucwangcisa injini tricks kukusetyenziswa kwe-anchor text. Xa isetyenziswe kakuhle, umbhalo we-anchor unokuphucula kakhulu indawo yokubeka kwindawo injini yokukhangela iphepha lemihla (SERPs).
Kwalabo abangayazi kakuhle le ngongoma, u-Andrew Dyhan, u-14 (Semalt umphathi wempumelelo yomthengi, uchaza ukuba umbhalo we-anchor ubhekisela kubalinganiswa obucatshulwa okanye umbhalo kwi-hyperlink. Ngokuqhelekileyo, abalinganiswa / itekisi bemibala ohlukileyo ukusuka kuwo wonke umxholo kwaye ngamanye amaxesha ugqityiweyo. Xa umsebenzisi echofoza kwi-anchor text, uyiswa kwenye indawo - how to buy backlinks. Unokwenza ezi zikhonkwane usebenzisa i-HTML okanye iCSS.
Kutheni iincwadi ze-anchor zibaluleke kangaka kwi-SEO?
Iingcamango ze-Anchor ziza kuba zingathandwa njengokuba zikhona namhlanje ukuba zingasetyenziselwa injongo ye-backlinks. Badlala indima enkulu ekusebenziseni i-backlinks (ibalulekileyo ye-SEO ranking factor). Ukongeza, ii-injini zisetyenziselwa ukuba zihlawulise iiwebhsayithi ukuze zenzeke ngokugqithiseleyo kunye ne-spamming. Yingakho kubalulekile ukuba iingcali ze-SEO ziqonde ngokucacileyo indlela yokusebenzisa ngokufanelekileyo itekisi.
Umbhalo we-anchor uphinde uxhamle kubafundi bequlatho njengoko ubanika ingcamango yoluphi umxholo abakufanele balindele ukufumana kwindawo ekujoliswe ngayo kuyo.
Iindidi zee-Anchor Text
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zombhalo we-anchor. Iingcali ze-SEO zingasebenzisa enye okanye udibaniso lwezinto ezilandelayo ukulungiselela ukwandisa umxholo wazo:
Iinqwelo ezijoliswe kuyo: Iingcali zokuthengisa kwi-intanethi ezibandakanyeka isixhobo sokudibanisa i-link senze iitriki zokubhaliweyo ngamagama aphambili afana namagama aphambili ephepha lewebhu okanye kumqulu abajolise kuwo. Ngamanye amagama, ukuba ufuna ukudibanisa nesayithi elinelulingene 'neengcinga zokuvuselela ikhitshi', sebenzisa eli binzana elibalulekileyo kwiikhomplikhi zakho.
Umbhalo we-anchor oqhelekileyo: ezi zikhonkco ezixhasayo ezikukhokelela kwizixhobo ezinokuba luncedo. Imizekelo yezikhonkwane eziqhelekileyo zibandakanya "fumana ulwazi olungaphezulu apha", "klikha apha ngenqaku lamahhala", "fumana i-eBook yakho yamahhala apha" kunye njalo.
Iinqwelo eziphathekayo: Iinqwelo eziphathekayo zisebenzisa igama loshishino webhsayithi njengombhalo. Zibhekwa njengoluhlobo olukhuselekileyo lwe-anchor ukusebenzisa. Yingakho iimveliso ezinkulu ezifana ne-Amazon ziza kusebenzisa amanqaku amaninzi anotshiweyo kumxholo wazo njengokuba kunokwenzeka ubuncinci bokuba ngaphezulu kokusebenza.
Ukusetyenziswa ngokugqithiseleyo kukusetyenziswa ngokugqithisileyo kwimixholo efanayo yesiqhelo kwiphepha okanye ukubonakala kwetheksthi efanayo kumaphepha amaninzi kwiwebhusayithi. Ingakhokelela ekubeni ulandelwe ngeenjini zokukhangela njengoko iphepha libonwa njenge-spammy kwaye lingenalo lomsebenzisi. Ulungelelwaniso olongezelelekileyo kufuneka, ke, lugwenywe ngazo zonke iindlela.
Iinqanawa ezinxibelelwano ezingenanto: Le mibhalo yesikhombi esisebenzisa i-URL yesayithi ukuyibuyisela kuyo. Zilula ukuyisebenzisa kodwa zifuna ukuhanjiswa kakuhle ngaphakathi komxholo. Ubuninzi beekhonkco zeekhonkco ze-asethi azimele zingaphaya kwe-15%.
Imifanekiso kunye ne-alt 'tag' njengamahange: Ukusetyenziswa kwemifanekiso kwisiqulatho sewebhusayithi kuyanconywa namhlanje. Inceda ukwandisa ukusebenzisana komsebenzisi kunye nomxholo. Xa usebenzisa umfanekiso njengomnxeba kwenye indawo, unika kwakhona itekisi efanelekileyo 'ye-alt' yomfanekiso. Iinjongo zophando zifunde le tag 'alt' njenge-anchor text.
I-LSI (i-Latent Semantic Indexing) ihange: I-LSI ibhekiselele ekusebenziseni iigama-magama (kungekhona ngokucacileyo ukuchaneka). Ziyintlukwano esondeleyo yegama elingundoqo. I-anchors ze-LSI zinceda kakhulu xa ungafuni ukusebenzisa igama eliphambili kwiikhonkco zakho.
Olunye uhlobo lweembalo ze-anchor olubhekwa njengekhuselekile kwaye lusebenzayo kukudibanisa kwe-brand and anchor. Kule meko, udala ii hyperlink ngegama lakho lomtshini kunye negama eliphambili lokukhetha kwakho. Ngokomzekelo, ungasebenzisa "iinkonzo zokucoca 'ngegama lakho lomnxeba'" njengegama lakho lenkcazelo yegama elingundoqo.
Ukuba ufuna ukufumana okulungileyo kwiimpawu zesikhombi, qiniseka ukuba uwasebenzise ngokucamngca. Zifanele zihanjiswe ngokufanelekileyo kunye nokuxininisa okulungileyo. Zifanele kwakhona zibe ziincinci kwaye zihambelane nomxholo kwiphepha lekhonkco kunye nekhagethi. Iicatshulwa zesikebhe ze-Spammy yiyitikiti ngokuthe ngqo yokubanjwa njengokuba kunjalo ama-anchor angavakalayo okwemvelo kwisicatshulwa. Ungalokothi usebenzise izicatshulwa ezinjengomxholo wakho kumxholo wakho njengoko ziya kuphazamisa ngokuqinisekileyo i-SEO yakho.